विद्या र धन आर्जनको लागि जप्नुहोस् यस्ता मन्त्र, बर्सिनेछ घरमा सफलताका साथै धन ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/विद्या र धन आर्जनको लागि जप्नुहोस् यस्ता मन्त्र, बर्सिनेछ घरमा सफलताका साथै धन !
विद्या र धन आर्जनको लागि जप्नुहोस् यस्ता मन्त्र, बर्सिनेछ घरमा सफलताका साथै धन !
काठमाडौँ । हिदू धर्मशास्त्र अनुसार विद्या र धन आर्जनको लागि यस्ता मन्त्र जप्नुहोस् र सफलता प्राप्त गर्नुहोस् , धनसम्पत्ति, रुपैयाँ पैसा बिनाको जीवन कस्तो होला रु पक्कै पनि धन सम्पत्ति बिना कोही कसैलाई पनि जीवन धान्न गारो हुन्छ ।
त्यसैले मानिस सम्पत्ति कमाउन जागीर गर्दछन् । तर त्यो जागीर पाउन पनि कहाँ सजिलो छ र रु कतिपय मानिसले अनैकौ उपाय गर्दा पनि जागीर पाउन सकेका छैनन् तर हिदू धर्मशास्त्र अनुसार यस्तो समस्याको समाधानका लागि शास्त्रहरुमा धेरै कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् ।
धर्मशास्त्रहरुका अनुसार जागीर वा धनसम्पत्ति कमाउन भगवानको आराधना सहित व्रत बस्नु पर्ने हुन्छ । व्रत बस्नाले मनुष्यको सबै प्रकारको समस्या समाधान भई मनले चाहे अनुसारको वरदान प्राप्त हुने मान्यता रहेदै आएको छ तर के का लागि कस्तो व्रत बस्ने रु त्यसबारे जानकारी नहुदाँ द्विविधा हुने गर्दछ । त्यसैले हामी जागीर पाउन र धनसम्पत्ति कमाउन कुन व्रत कसरी बस्ने त्यसबारे जानकारी दिँदैछौ जुन निम्न छन्
१.जागीर पाउनका लागी शनिबार शनी देवको व्रत राख्नु पर्दछ ।
२.शनिवार बिहान सबेरै उठेर पहिले एक सफा भाडामा तेल राखि आफ्नो छाया हेर्नुपर्दछ ।
३.आफुले छाया हेरेको तेल, आवश्यकता भएका ब्यक्तिलाई दान गर्नुपर्दछ ।
४.शनिवार दिनभर केवल पानी मात्र ग्रहण गर्नुपर्दछ । अन्न सेवन गर्नुहुदैन ।
५ .साँझमा पीपलको वृक्षको फेदमा जल अर्पण गरी सरस्युको तेलमा दियो बाल्नु पर्दछ ।
६.त्यसपछि ॐ शं शनैश्चराय नमः मन्त्रको १०८ पटक जप गर्दै शनीको आराधना गर्नुपर्दछ ।
७.साझमा दुध, फल लगायतका फलाहार सेवन गर्न सकिन्छ ।
८.धनसम्पत्ति प्राप्तीका लागी लक्ष्मी भगवतीको ८ वटा शुक्रवार व्रत बस्नु पर्दछ ।
९.यस दिन लक्ष्मीको अष्ट स्वरुपको उपासना गर्दै धनलक्ष्मी स्वरुपको आराधना गर्नुपर्दछ ।
१०.व्रतको दिन, दिनभर केवल जलाहार वा फलाहार मात्र ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
११.व्रतको मध्यरात्रीमा लक्ष्मीको प्रतिमा वा तस्बिर सम्मुखमा दियो बाल्नु पर्दछ ।
१२.रातिको समयमा ॐ श्रीं श्रीयै नमः मन्त्रको ११ पटक जप गरी आरती गर्नुपर्दछ ।
१३.आरती पश्चात गुलाबको पुष्प वा गुलाबबाट बनेको इत्र समर्पित गर्नपर्दछ ।
१४. त्यसपश्चात मात्र अन्नको सेवन गर्नुपर्दछ । तर नुन सेवन गर्नुहुदैन